Isebenzisa i-Apt-Pinning ku-Debian | Kusuka kuLinux
Isebenzisa i-Apt-Pinning ku-Debian
Ngibuyile ku Squeeze Debian. Isizathu esingishukumisele ukuba ngibuyele egatsheni elizinzile le- Debian, (njengoba bengilokhu ngisebenzisa njalo Testing) kube ukuboniswa okungalungile kwefayela le- ukuthayipha usebenzisa a i-kernel ngaphezulu kwenguqulo 2.6.32-5-686.
Inkinga enkulu ngokuthatha lesi sinyathelo ukuthi ngilahlekelwa amaphakheji amaningi asezinqolobaneni ze Ukuhlolwa kwe-Debian futhi lokho Isitebhisi seDebian ayinayo. Isibonelo sazo LibreOffice 3.4.3 y I-Turpial.
Ngenhlanhla ungene Debian kukhona inketho Kulungile kubizwa Ukuphina ngokulungele futhi uzozibuza, kwenzelwa ini lokho? Yebo, ngaphandle kokungena etsheni lokusila lobuchwepheshe, nge Ukuphina ngokulungele Ngingasebenzisa Squeeze Debian futhi ngasikhathi sinye, amaphakheji we UDebian Wheezy. Kulungile?
Ngemuva kokufaka Squeeze Debian bese uyilungiselela, uyivuselele njalonjalo, into yokuqala engiyenzayo ukufaka amakhosombe we Testing, ngakho-ke ifayili /etc/apt/source.list libukeka kanjena:
Kamuva ngakha ifayili / njll / apt / izintandokazi ngabeka lokhu ngaphakathi:
Manje ngivula i-terminal update amakhosombe.
Manje lapho ngifuna ukufaka I-Turpial ngokwesibonelo nginezindlela ezimbili zokukwenza esigungwini:
Y I-APT kunesibopho sokukhetha kuphela ukuncika okudingekayo kokugcina okukodwa nokunye. Uma ufuna imininingwane engaphezulu ngalokhu, ungavakashela lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isebenzisa i-Apt-Pinning ku-Debian
mmm okuthakazelisa kakhulu 🙂
Ngisebenzisa iDebian Squeeze kwi-PC yami yasekhaya futhi le datha ilusizo kakhulu kimi. Ake sizame 🙂
NGIYABONGA ngamagalelo owenzayo kubhulogi yakho.
PD = Angikwazi ukufaka isixhumanisi osibeke ekugcineni kokuthunyelwe, leso esikhomba esithangamini se-esdebian.
Ngabe uyaxhuma kusuka eCuba? Ngoba uma kunjalo, khona-ke ngizokutshela ukuthi sikhiyiwe ku-esDebian.
Ngingowase-Argentina seems Kubonakala sengathi iseva ye-esdebian yayingekho online ngesikhathi sokuthunyelwe kwakho, ngakho-ke angikwazanga ukukufaka lapho.
Imbali yabo bayacacisa:
Siyabonga ngolwazi, thina (i-elav nami) asikwazi ukufinyelela ku-esDebian ngoba nje sihlala eCuba, ngakho-ke kithi kuhlala kungaxhunyiwe ku-inthanethi noma kuvaliwe haha.
Noma kunjalo ngiyabonga ngempela, futhi ngendlela: «Siyakwamukela kusayithi lethu eliphansi» 🙂
Ngisanda kufunda lokhu: "sikhiyelwe ku-esDebian."
Kubheda kanjani, kungani lokho kwenzeka?
Kwenzeka ngoba izilima eziningi ezivela ezweni lakithi (eCuba) zangena e-esDebian futhi zabhala noma iziphi izinto eziyiziphukuphuku, ngakho-ke ... abaphathi be-esDebian bakhetha "isisombululo" esilula kunazo zonke kubo, kepha esona sibabhekise kakhulu ... uvimbele konke ukufinyelela kuma-IPs aseCuba ¬_¬
Le yinto engicasula ngokwami, ikhipha liphi ilungelo?
Ngenkathi ngibhalisa e-esdebian kwakudingeka ngilinde izinsuku ezi-5 ukuze ngibhale futhi lapho ngizothumela bangicela amaphuzu ayi-5… angizange ngikuthande futhi ngacela (ngomusa) umphathi ukuba angibuze izikhathi ezimbili, ngathola ubuwula izimpendulo futhi ngokwesithathu ngiyithumele ku-m…. Ngisabhalisiwe: /
Kufanele ucabangele ukunika isithangami umfutho nokwakha inketho efanelekile.Ngicabanga ukuthi ngohambo nabalandeli onabo bekungeke kube nzima.
Ngelungelo lokuthi bangabaphathi ... akunjalo, kungamanzi adlule, kufanele siwacindezele hhayi okunye. Empeleni izikhathi zokugcina engingene ngazo bekune-IPs evela kwamanye amazwe.
Ngokunikeza isithangami i-yep yep uqinisile, besingakaze sicabange ukuthi singakwenza kanjani okwamanje 🙂
Ngemibono embalwa, into yokuqala kungaba ukuwukhuphula ngokwengeziwe futhi ngokunengqondo ungathola ubukhona obubalulekile ekhasini eliyinhloko bese ushintsha imibono iye kokuthunyelwe esithangamini ... Kungasiza futhi ukufaka inkomba engcono ukuphawula ngohlobo nobulili okuhambisana nesithangami.
Sisebenza kulokho… Noma kunjalo, uma othile engadonsa intambo ukusisiza ngalo msebenzi, kungcono kakhulu. Esikudingayo ukuthi singaluthola kanjani ulwazi ku-FluxBB RSS bese siluprinta kuwebhusayithi usebenzisa i-PHP.
Ukuguqula ukuphawula kusiba sesithangamini, kuzofanele kube okuzenzakalelayo nokubonisa ngokuphelele kumfundi, futhi asikatholi ukuthi singakwenza kanjani lokhu 🙁
Kubukeka kunjalo http://www.esdebian.org iphansi manje, ngendlela kukhona ama-hdp amanye uma kungewona iningi kuleso sithangami. Ngenkathi ngisebenzisa i-debian, ngangidlula esithangamini ukuze ngibone ukuthi yini entsha futhi bahlala bephendula kuma-noobs ekukhahleleni. Jo ngincamela ukugwema ukubaphendula kunokunikeza impendulo engabasizi futhi engicasulile futhi bekungemina.
Ngiyazihlanganisa nami. Ngake ngabuza umbuzo ongeyona i-noob, futhi bangitshela ukuthi ngiyisiwula, ngoba nje bekufanele ngihlanganise okuthambile (angikhumbuli ukuthi iyiphi, ngicabanga ukuthi yi-squid) enamapharamitha athile… woza, ungangibhuqi! Ukube bekungumbhedo, ngiyakwamukela, yenza ukugxeka kwakho okuhlaselayo, kodwa ungakuthathi kumelane nawo wonke umuntu.
Uma sengeza kulokho okwesikhashana ama-IPs asuka eCuba (lapho ngihlala khona no-elav) enqatshelwe ukungena kusayithi, bathole ukwenqatshwa kwami ​​¬_¬
Ulwazi oluningi olubalulekile yebo, kepha ukuxhumana okubi nami sibhekana nesikhathi esiningi.
Kunabantu bayo yonke into ezithangamini, ngibonile abantu bekhuluma kabi ngaleyo nkundla abanye abantu basho okuphambene. Angimazi kodwa ngiyazazi izinkundla lapho uma ungeyena "u-pro" abangeke bakuphendule, njengeForo MTB.
Futhi isithangami se-Arch? Akubonakali njengabantu ababi kepha… Bekungenzekani uma ngiya lapho?
Yingakho ngicindezela abantu ngeposi, lapho sine-Malcer enebhokisi lokungenayo lonke eligcwele ama-imeyili avela kimi, noma iJabba, abanye babo bathumela eyodwa ngokufika ngesikhathi ku-elav kanti enye ku-KZKG ^ Gaara (ngisho lezo ezibucayi, hhayi lezo zebhola ).
Kungcono kuwo wonke umuntu angithi?
Mayelana nezinkundla ezifana nasempilweni uqobo, kukhona "abantu" okudingeka bazizwe ukuthi bangumuntu nokuthi kufanele babe ngaphezulu kwabanye.
Bayakujabulela ukuqhathaniswa kokufaneleka kwabo okuwukuphela kwabo, futhi bayakujabulela ukushaya ngamandla noma ukuxubha ontanga ngoba kuyindlela yabo yokuba ngumuntu othile.
Abanikeli ngaphezulu, masingaceli i-elm ngamapheya.
Kuliqiniso okushoyo. Angikaze ngibe nesibindi sokubuza noma yini ngokwesaba impendulo engakafiki. Kubonakala sengathi bayakhohlwa ukuthi uma kuyindlela yokusebenza yendawo yonke kufanele bavuleleke ngisho nakuma-newbies jojojojojojo
Kepha kufanele kuvunywe ukuthi kwi-wiki naku-esdebian forum ungathola izimpendulo zakho konke ongakudinga.
hahahaha yiziphi izinto, kuhle uma ungatholi impendulo esabekayo kuyasiza, noma e-archwiki nakwisithangami sayo kungokwami ​​okufanayo noma okungcono, kulabo abangama-noobs ababuza izinto ezisobala, babeka ukuxhumana okuqondile newiki noma banikeza impendulo ngomusa futhi bakucela ukuthi useshe i-wiki noma isithangami, kahle, kunokuba u-ode, basikisela ngezinkinga / imibuzo / ukungabaza okuzayo.
Lokhu okuthunyelwe kuyasiza kakhulu, kepha uma sidinga ukufaka izinhlelo zokusebenza njengalezo ezishiwo. Ngizolutha ku <° LINUX uma beqhubeka ukuthumela ku-GNU / Linux Debian.
Umlutha? … Lowo ngumqondo we-LOL !!!
Uma ungumlandeli we-Debian, ngincoma ukuthi ubheke ilebula lethu le-Debian, ungahlola nezindatshana ze-LMDE (iLinux Mint Debian Edition), okuthi ekugcineni kube yiDebian
Akukho lutho olukujabulisayo ukwazi ukuthi okuqukethwe kwakho okuthandayo, empeleni ... kuyaduduza kakhulu 🙂
Uma unokungabaza noma imibuzo, imibono, izikhalazo noma iziphakamiso, sazise, ​​kulungile, nakhu sonke sifana nabangane futhi siyasizana ^ _ ^
Sizobona ukuthi ngiba umlutha omkhulu yini ... Ukulutha kubi haha ​​futhi uma ngenza kabi ngenxa yazo ngiyakusola hahaha
Ngiyabonga! Sengivele ngibheke omaki, kepha ngithanda ukugxila ku-GNU / Linux Debian, okungcono uLenny noma Squeeze
Halala kubhulogi! ziyaqhubeka kanjena ...
Ngikholwe ukuthi sizoba nokuningi kwalokhu, ngangihlala ngisebenzisa iDebian, ngisebenzisa iDebian futhi kulokhu engikubonayo, ngizoqhubeka nokusebenzisa iDebian :)
Kube ukuboniswa okungalungile kwefonti kusetshenziswa i-kernel ephakeme kunenguqulo 2.6.32-5-686.
Angiyazi leyo font kodwa ... ingabe kubi kangako?
Uma ngibhekisa ku-typeface, ngikhuluma nge-Text Font engenagama. Futhi yebo, ngikholwe kubi kakhulu, kubhulogi eyedlule ngikhulume kancane ngalesi sihloko futhi ngashiya izithombe ezithile zokuthayipha kubhalwe phansi. Cishe akunakwenzeka ukuthi ufunde ngezinye izikhathi.
Ngishiyele isixhumanisi, sengivele ngifuna ukwazi
Uma ngibhekisa kubuchwephesha bokubhala, ngikhuluma ngefonti yombhalo engenagama
: ~ # apt-get ukufaka i-turpial / ukuhlolwa
Uhlobo olukhethiwe "1.5.0-1" (Debian: testing [all]) ye- "turpial"
turpial: Kuya nge: python-gtk2 (> = 2.12.0) kepha ngeke ifake
Kuya nge: python-notify (> = 0.1.1) kepha ngeke ifake
Kuya nge: python-gst0.10 kepha ngeke ifake
Kuya nge-python-webkit (> = 1.1.2) kepha ngeke ifake
Kuya nge: python-gtkspell kepha ngeke ifake
E: Amaphakheji aphukile
Ngendlela efanayo, uma ngabe ukuvuselelwa okuphephile kwenziwa ngokufaneleka noma ngokuthuthuka kokuthola okuthe xaxa… xwayisa ukulanda ngaphezu kwe-500mb, ngiqonde ukuvuselela i-distro… ungacela uchaze okuthile ngokuthini ukuphina, futhi ngaleyo nkinga yamaphakheji aphukile Yini enginayo? Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili
Ngikhombise ifayela lakho / etc / apt / preferences kanye /etc/apt/source.list ngoba liyangisebenzela ngaphandle kwezinkinga. Manje, ngiyacacisa, lokhu kuphina okunamandla akuyona i-panacea, kumane nje kungenye indlela engadala noma engadali izinkinga.
USergio Alonso kusho
Ngiyabonga, isebenze kahle ku-Wheezy ibheke kuJessie, futhi yangivumela ukuthi ngixhumane ne-opensh test yakamuva esitebeleni.
Phendula uSergio Alonso
Umhlahlandlela Wokufaka we-Debian Squeeze-by-Step
Izimbungulu ezi-2 ezikhathazayo eKrita